कोरोनालाई जित्ने ९ देश , जहाँ अब कोरोनाको बिरामी एउटा पनि छैन, गरे कोराना मुक्त देश घोषणा !!! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/कोरोनालाई जित्ने ९ देश , जहाँ अब कोरोनाको बिरामी एउटा पनि छैन, गरे कोराना मुक्त देश घोषणा !!!
काठमाडौँ । विश्वभर कोरोनाभाइरस सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या ७० लाख नाघेको छ । चार लाख भन्दा बढीको निध`न भएको छ । दक्षिण एशियाली राष्ट्र भारत, पाकिस्तान र नेपालमा भने कोरोना सङ्क्र`मणको दैनिक नयाँ बिरामीको सङ्ख्या चिन्ताजनक रुपमा बढिरहँदा यी नौ वटा राष्ट्रले कोरोना भाइरस मु`क्त भएको घोषणा गरेका छन् ।
न्युजिल्याण्ड सात हप्ताको लकडाउनलाई कडा`इपूर्वक लागू गर्यो । जसमा सबै व्यापारिक र व्यावसायिक गतिविधि र सर्वसाधारणको जनजीवन पूर्णरुपमा ठप्प रह्यो । केही अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत श्रमिकका अतिरिक्त । प्रधान मन्त्री जसिन्डा अर्डेनले जुन ९ देखि कोरोना भाइर`सको सङ्क्र`मण फैलनसक्ने जोखिमबीच अपनाइएको सबै सतर्कताका उपायहरू खुला भएको र सीमा प्रतिबन्ध यथावत रहने घोषणा गर्नुभयो ।
तान्जानिया : आइतबार अफ्रिकी राष्ट्र तान्जानियाले कोरोनामुक्त भएको दाबी गर्यो । सार्वजनिक रुपमा कोरोना सङ्क्रमणसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न बन्द गरेको छ हप्तापछि उसले यस्तो दाबी गर्यो । दैविक कृपाले कोरोना मुक्त हुन सफल भएको तान्जानियाका राष्ट्रपति जोन मगुफुलीले आइतबार एक चर्चमा आयोजित समारोहमा धारणा राख्नुभयो । तान्जानियामा कोरोना भाइरस बाट सङ्क्र मितको सङ्ख्या ५०९ जना रहेको छ ।
भ्याटिकन : द भ्याटिकनले जुन ६ मा कोरोना भाइरसका कुनै बिरामी नरहेको जनाएको छ । सबै १२ जना सङ्क्रमित मुक्त भइसकेको उसले जनाएको छ । द भ्याटिकनका प्रवक्ता मटिओ ब्रुनीले सबैभन्दा पछिल्ला बिरामीको परीक्षण प्रतिवेदन सङ्क्र`मण नरहेको पुष्टिसँगै मुक्त भएको बताउनुभयो । द भ्याटिकनमा कोरोनाबाट नि`धन भएको छैन । स्वास्थ्य आपातकालीन अवस्था सुरु भए यता पाेप फ्रान्सिसले जुन ७ मा सेन्ट पिटर्स स्क्वायरमा पहिलोपटक सम्बोधन गर्नुभयो । द भ्याटिकनको जनसङ्ख्या मात्र ८२५ रहेको छ ।
फिजी : मे महिनाको अन्तिम साता फिजीले कोरोना भाइरस सङ्क्र मण बाट मुक्त भएको जनायो । उसले सबै १८ जना भाइरस सङ्क्रमण बा ट मुक्त भएको जनाएको छ । दक्षिणी प्रशान्त क्षेत्रको टापू राष्ट्र फिजीका प्रधानमन्त्री फ्रान्क बैनिमरामाले शुक्रबार कोरोनामु क्तको घोषणा गर्नुभयो । कुनै सक्रिय बिरामी नभएको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।
मोन्टेनेग्रो : पहिलो सङ्क्रमित पुष्टि भएको ६९ दिनपछि मोन्टेनेग्रोले मे २४ मा कोरोना मुक्त भएको घोषणा गरेको छ । कोरोना मुक्त घोषणा गर्ने मोन्टेनेग्रो पहिलो युरोपेली राष्ट्र हो । मोन्टेनेग्रोमा ३२४ जना कोरोनाभाइरस सङ्क्र`मितको पु`ष्टि भएको छ । नौ जनाको निध`न दर्ता गरिएको छ ।
सेसिलाज : टापु राष्ट्र सेसिलाजको जनसङ्ख्या ९६ हजार ७६२ छ । मे १८ मा सेसिलाजको स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाबाट पूर्ण मुक्त भएको जनायो । सेसिलाजमा ११ जना कोरोनाभाइरसका सङ्क्रमित`को पुष्टि भएको थियो । नि`धन को सामना उसले गरेन ।
सेन्ट किट्स एण्ड नेभिस ; वेष्टइन्डिज राष्ट्र सेन्ट किट्स एण्ड नेभिसले मई १९ मा कोरोनामुक्त भएको घोषणा गर्यो । ५२ हजार ४४१ जन`सङ्ख्या रहेको टापु राष्ट्र सेन्ट किट्स एण्ड नेभिसमा कोरोना सङ्क्रमणका १५ बिरामी फेला परेको थियो । सबै सङ्क्र`मित विदेशबाट आएको जनाएको सेन्ट किट्स एण्ड नेभिसले कोरोना सङ्क्र`मणको कुनै बिरामी नभएको जनाएको छ ।
टिमोर लेस्ट : आफ्नो २४ औँ सङ्क्र`मित निकोपछि मई १५ मेमा टापु राष्ट्र टिमोर लेस्टले कोरो`नामुक्त भएको जनाएको छ । भाइरसको सङमणबाट नि`धन को घ`टना` टिमोरले सामना गरेनन ।पपुवा न्यू गिनी : सन् २०१८ को जनगणना अनुसार ८६ लाख जनसङ्ख्या भएको प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्र पपुवा न्यू गिनीले मे ४ तारिमा नै कोरोनामुक्त भएको दाबी गर्यो । पपुवा न्यू गिनीमा कोरोनाका २४ जना सङ्क्रमितको पु` भएको थियो । भाइरस बाट कुनै निधन को सामना उसले गरेन । श्रोत गोरखापत्र अनलाइन
आज एकैदिन ५८६ मा कोरोना संक्र`मण पु`ष्टि, संक्र`मितको संख्या ७१७७ पुग्यो !!